Drive ကို Berget | Holmbygden.se
ကောင်းသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ nice အားလပ်ရက်အိမ်သူအိမ်သားတည်ရှိသည် 50 ရေချိုးအတူမီတာHolmsjön- နှင့် angle. အကြီးစားတောင်ဘက်-facing ဟင်းလင်းပြင်. အိုင်နှင့်သစ်တောအပေါ်စီး, သင်သည်သင်၏အိမ်တံခါးပေါ်တွင်ရှိ. အကြီးစားတွေအများကြီးမြက် coated မျက်နှာပြင်များ, မြက်ခင်း, ဥယျာဉ်တော်ပရိဘောဂ. ကလေးကဖော်ရွေ! ချေးဖို့လှေလှော်လှေရရှိနိုင်. ဘာဘီကျူးအဆောက်အဦကိုဆင်းHolmsjönမှာ. GSM နှင့် 3G ကွန်ရက်များပေါ်တွင်ကောင်းသောလွှမ်းခြုံရှိပါတယ်. အားလပ်ရက်သီတင်းပတ်အတွင်းရှေ့ဆက် mail နဲ့သတင်းစာတွေစေဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
စြေး: 2000/ ရက်သတ္တပတ်